पिस्टा विनाइग्रेटको साथ प्राकृतिक सेता शतावरी ThermoRecines
Verduras15 मिनेट4 व्यक्ति100२ क्यालोरी
के तपाईंले कहिले प्रयास गर्नुभएको छ? प्राकृतिक सेतो शतावरी? यद्यपि केहि राम्रो डिब्बाबंद सेतो शतावरी तालुको लागि खुसीको कुरा हो जुन हामी स्वादिष्टको रूपमा उत्कृष्ट व्यंजनहरू तयार गर्न सक्छौं। सेतो शतावरी क्रीम, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि प्राकृतिक कोशिस गर्नुहोस्। को रूप मा मौसम, म तपाईंलाई यस अवसरको बेवास्ता गर्न चाहान्दिनँ तपाईंलाई एक राम्रो नुस्खा देखाउनको लागि उनीहरूलाई स्वादिष्ट पिस्ता विनाइग्रेटको साथ उपभोग गर्न।
यो एक धेरै ताजा र सरल नुस्खा हो, जुन हामी मात्र तयार हुनेछौं 15 मिनेट। शतावरी खपत धेरै छ स्वास्थ्यको लागि लाभदायक किनभने यसमा मूत्रवर्धक र भडकाउने गुणहरू छन् र भिटामिन र फाइबर पनि उच्च छ। थप रूपमा, यो धेरै थोरै क्यालोरीहरू र धेरै स्वादिष्ट सहितको खाना हो।
अन्तमा, यो नुस्खा celiacs, ल्याक्टोज असहिष्णु, अण्डा, शाकाहारी र शाकाहारीहरु को लागी उपयुक्त छ।
1 ताजा सेतो asparagus पिस्ता vinaigrette साथ
सेतो शतावरी को एक गुच्छा (लगभग १०-१२ इकाई)
Quality० ग्राम राम्रो गुणको अतिरिक्त कुमारी अलिभ तेल
Hand मुट्ठी पिस्ता
हामी पिस्ता छल्छौं र तिनीहरूलाई सिसामा राख्छौं। हामी बिग्रियो Seconds० सेकेन्ड, गति 2। हामी फिर्ता र आरक्षित।
हामी गिलासमा नुन र तातोको साथ पानीको लिटर राख्छौं Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, चम्चा गति।
जबकि हामी यसका सबै पक्षमा शतावरी छिलछौं पिलरको सहयोगमा र हामी पुच्छरको गाढा भाग हटाउछौं जुन कडा हुनेछ। यसलाई हटाउनको लागि, हामी तिनीहरूलाई पुच्छरको तल्लो भागमा ध्यानपूर्वक फोल्ड गर्दछौं र तिनीहरू आफैंमा सही ठाउँमा तोड्दछन्।
हामी शतावरीलाई भेरोमा ट्रेमा राख्छौं र शीशाको माथि राख्छौं। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २। हामी जाँच गर्दछौं कि ती चक्कुको सहयोगमा पहिले नै कोमल छन् र यदि हो भने, हटाउनुहोस्। पोइन्ट अत्यधिक कोमल हुनु हुँदैन, तर कुरकुरा र अल डेन्टेट (क्यान्ड शतावरी र हरी शतावरीसँग मिल्दोजुल्दो केहि पनि गर्न हुँदैन)। यदि होईन भने, more थप मिनेट तालिका बनाउनुहोस्।
एउटा फ्राई pan प्यान वा ग्रिलमा हामी थोरै जैतुनको तेल हाल्छौं र तिनीहरूलाई ग्रिलमा पकाउँदछौं जब सम्म तिनीहरू सुनौलो रंगको हुँदैनन् (मध्यम तातोमा प्रत्येक पक्षमा करीव २- minutes मिनेट)।
हामी ग्रिलमा asparagus पकाउँदा हामी vinaigrette तयार गर्न जाँदैछन्। हामी गिलासबाट खाना पकाउने पानी हटाउँछौं र यसलाई नधोईकन, तेल, नुन र भिनेगर थप्दछौं। हामी पायौं Seconds० सेकेन्ड, गति 30।
हामी भाँडामा शतावरी सेवा गर्दछौं, भिनाग्रेटको साथ पानी र माथिको पिस्तासँगै सजाउँछौं।
म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि यस तथ्यको फाइदा लिन हामी गहुँलाई भाँडामा हालेर भाँडामा हालेर भाँडामा हालेर भाँडा हालेर भाँडा हालेर भाँडा हालेर राख्न जाँदैछौं।
यद्यपि तिनीहरू चिसो लिन सकिन्छ, म तिनीहरूलाई न्यानो खान मन पराउँछु।
तिनीहरूलाई तुरुन्त लिनु महत्त्वपूर्ण छ किनकि अन्यथा पिस्ता पनि नरम हुनेछ। हामी पिस्ता काट्न अग्रगमन गर्न सक्छौं, asparagus को भेरोमा मा पकाउने र vinaigrette अग्रिम मा तयार गर्न। यसप्रकार, जब खाना खानेहरू आउँदछन्, हामी केवल ग्रिलबाट शतावरी पार गर्नुपर्नेछ र पिस्तासहित प्लेट भेला गर्नुपर्नेछ।
थप जानकारी - सेतो शतावरी क्रीम
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सलाद र तरकारीहरू, सजिलो, १ 15 मिनेट भन्दा कम, वरोमा रेसिपीहरू, शासन, भेगन, शाकाहारी
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » सलाद र तरकारीहरू » ताजा सेतो asparagus पिस्ता vinaigrette साथ